विद्यायलयले शुल्क लिएपछि त्यस वापत दिने सेवाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ
मुकुन्दराज शर्मा, प्रिन्सिपल, लिटिल एन्जल्स
२०७५ बैशाख ३ सोमबार ०९:४५:००
नयाँ वर्ष २०७५ को सुरुवात देखि नै देश विद्यालय भर्ना अभियानमा छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यालयहरुले लिने चर्को शुल्कको व्यापक चर्चा चल्ने गरेको छ ।
यसवर्ष पनि संचारमाध्यमहरुमा अचाकली शुल्क लिने केही विद्यालयहरुको नामसहित समाचारहरुले प्राथमिकता पाएका छन् ।
किन विद्यालयहरुले अहिले चर्को शुल्क लिइरहेका छन् ? सामान्य जिवन यापन गर्नेका छोराछोरीले शिक्षा लिनै नपाउने अवस्था किन बन्दैछ ? लगायतका विषयमा निजी विद्यालय लिटिज एन्जल्स स्कुलका प्रधानाध्यापक मुकुन्दराज शर्मासँग बाह्रखरीका लागि विजेता चौधरीले गरेको कुराकानी ।
यहाँ प्रधानाध्यापक रहेको विद्यालय लिटिल एन्जल्स पनि महंगो विद्यालयभित्रै पर्छ । शुल्क किन यति मंहगो ?
होइन । केही स्कुलहरु अचाकली महँगो छन् र तिनीहरुले चर्को शुल्क लिने गरेका रहेछन्, त्यो उनीहरुको कुरा हो । तर ति स्कुलहरुले चर्को शल्क लियो भनेर आउने समाचारहरुमा प्रत्येक दिन जसो हाम्रो स्कुलको नाम पनि जोडिएर आउँछ । यो कुरामा मेरो आपत्ति छ । भ्रम चिर्नुपर्ने अवस्था नै आएको छ ।
हाम्रोमा पुरानो विद्यार्थीका अभिभावकलाई शुल्कको विषयमा थाहा छ तर नयाँ भर्नाका लागि आउने अभिभावकमा भ्रम सृजना हुने गरेको छ ।
महँगो शुल्क लिने स्कुल र एलएको शुल्क दाँजेर नै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हामीले चर्को वा सर्वसाधारणले तिर्न नसक्ने गरी शुल्क निर्धारण गर्ने गरेका छैनौ ।
ठुला र नाम चलेका स्कुलहरुको टार्गेट विद्यार्थी समूह हुन्छ, तपार्इँको स्कुलको पनि त्यस्तै होइन र ?
हामीले भर्नालाई टार्गेट गरेका छौं । आम नागरिकलाई फोकस गुर्न नै हाम्रो सुरुदेखिको उद्देश्य रहेको छ । हामी यत्तिकै स्थापित स्कुल भएको होइन, भौतिक र विद्यार्थी संख्याको आधारमा पनि ठुलो र एकेडमीको हिसाबले उत्कृष्ट विद्यालय हो । एलएमा ७७ जिल्लाका विद्यार्थी छन् । सबैले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँन् भनेर नै शुल्क पनि अत्यन्तै तल राखेर पढाइमा राम्रो परिणाम दिने हाम्रो प्रतिवद्धता रहेको छ । र त्यसमा सफल हुँदै आएका पनि छौं ।
यस वर्ष वार्षिक र मासिक शुल्कमा कति वृद्धि गर्नु भयो ?
हामी एक मात्र स्कुल हौं, जसले यस वर्ष वार्षिक शुल्क नबढाउने घोषणा गरेका छौं । ०७५ को लागि हाम्रो पछिल्लो वर्षको शुल्क नै कायम छ । हाम्रो स्कुलमा तीन प्रकारका विद्यार्थीहरु छन् । एउटा विहान ९ बजे आएर तीन बजे जाने जसकोलागि न्युनतम शुल्क निर्धारण गरेका छौं । न्युुनतम शुल्क सबै विद्यार्थीको लागि समान छ । त्यस्तै छात्राबासमा बस्ने र दिवा छात्रावासमा बस्नेको लागि सुविधा लिए अनुसारको अतिरिक्त तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ऐच्छिक हो ।
हाम्रो न्युनतम मासिक शुल्क कक्षा १ देखि ३ सम्मको समान रहेको छ, ४ हजार ६ सय । त्यस्तै ४ देखि कक्षा ५ सम्म ४ हजार ९ सय । कक्षा ६ देखि ७ सम्मको एउटै शुल्क निर्धारण गरेका छौं ५ हजार २ सय ५० र कक्षा ८ देखि १० लाई ५ हजार ६ सय निर्धारण गरेका छौं । बस, खाजा, खाना र दिवा छात्राबास तथा छात्राबासको सेवा लिनेले अतिरिक्त शुल्क सेवा लिए वापत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
बार्षिकको क्रमशः कक्षा १ देखि ५ कक्षासम्म ६ हजार ३ सय निर्धारण गरेका छौं । भर्ना र रजिष्ट्रेशन १ देखि ५ लार्य ७ हजार ५ सय रहेको छ । त्यस्तै कक्षा ६ देखि ७ लाई वार्षिक ८ हजार ३ सय र भर्ना तथा रजिष्ट्रेशन १० हजार रहेको छ । त्यसैगरी कक्षा ८ देखि १० लाई वार्षिक ९ हजार ३ सय र भर्नालगायत १० हजार तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
भर्ना शुल्क थोरै देखाएर अतिरिक्त शुल्कमा ढाड सेकाउने होला नि ? कैयौं विद्यालयहरु त्यस्ता पनि छन् !
अतिरिक्त शुल्क भनेको सुविधाका आधारमा तिर्ने हो । अन्य स्कुलको नीति होला तर हामीले वार्षिक शुल्क शिक्षा नियमावलीले तोकेको र यो यो शीर्षकमा यति शुल्कमात्रै लिने भने पछि त्यत्तिमात्रै लिने हो । हाम्रोमा नृत्य, कला र खेललगायतका शुल्क एक पटक वार्षिक रुपमा लिएपछि पुनः कुनै शिर्षकमा लिने चलन छैन । शुल्क बढेन भने वार्षिक शुल्क पनि हामीले बढाउँदैनौ ।
सबैले आफ्नो विद्यालयको शुल्क तोक्न पाउँछ, त्यो तोक्ने अधिकार विद्यालयलाई छ तर त्यसको औचित्यको पुष्टि पनि हामीले गर्नुपर्छ । हामीले शुल्क लिइसकेपछि त्यस वापत दिने सेवाको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ । होइन भने विद्यार्थी टिकाइरहन र विश्वसनियता बनाइ राख्न संभव हुँदैन ।